Lalaon'ny nosy 2019 :: Hanokana dimanjato tapitrisa ariary ny fanjakana malagasy • AoRaha
Lalaon’ny nosy 2019 Hanokana dimanjato tapitrisa ariary ny fanjakana malagasy
Tsy hisy ahiana intsony ny fiatrehan’ireo mpanao fanatanjahantena malagasy ny Lalaon’ny Nosy, andiany faha-11, hotanterahina any Maorisy amin’ny volana jolay ho avy izao. “Hanokana vola 500 tapitrisa ariary hanomanana ny lalao sy hiatrehana izany ary handoavana ireo latsakemboka iraisam-pirenena mety ho sakana tsy hahafahana mandray anjara ny fanjakana malagasy. Tafiditra ao anatin’ireo velirano nataon’ny Filoham-pirenena, izay efa novaina ho fandaharanasam-panjakana, ny tanora sy ny fanatanjahantena ka tsy hataon’ny fanjakana antsirambina”, hoy ny minisitry ny Tanora sy ny fanatanjahantena, Tinoka Roberto.
Ny fandaminana ny eo amin’ny toeram-pandraisana sy ireo fitaovana rehetra ilaina ary ny famoaham-bola no mety hahatara kely ny fiatrehan’ireo atleta malagasy ny fampivondronana. “Mety amin’ny faran’ity herinandro ity no hanomboka izany. Tsy maintsy mbola hisy rahateo ny fividianana fitaovana ho ampiasan’ireo atleta hiatrika ny Lalaon’ny Nosy amin’ity taona ity”, hoy hatrany ny minisitry ny Tanora sy ny fanatanjahantena.
Ankoatra izay dia ho hentitra amin’ny fanaraha-maso ny fampiasam-bolan’ireo Federasiona ihany koa ny minisitera, indrindra amin’ireo fanampiana omena. “Tsy maintsy hisy ny fanaraha-maso izany mba ho tsara tantana sy mangarahara”, hoy hatrany izy.
Kitra – “Arab Cup of Nation 2020” Resin’i Bahrein vokatry ny tandrevaka ny Barea
Haiady Judo – Lalao Olimpika Hifaninana any Alemaina i Fetra na tsy ao amin’ny heriny rehetra aza
Kitra – « Arab cup of nation 2020» Hikatsaka fandresena fanindroany ny Barea zandriny
Volley-ball faritra fahafito Hifandona amin’ny manasa-dalana ny Stef’Auto sy ny Cascade
Basket-ball Afro League :: Hotsenain’ny klioban’ i Angola ny Pôlisy malagasy
“Cross country” Analamanga :: Voahosotra ho tompondaka i Hajanirina sy Nani